dardaaranka hooyada habeenka aqalgalka - iftineducation.com
dardaaranka hooyada habeenka aqalgalka
aadan21 / August 22, 2016
iftineducation.com – Jidhka dhis:- Ma doonaysa inaad kalsooni naftaada u yeelatid? Sida kaliyah ee kalsooni lagu yeelan karo oo raga badankoodu ka fikiraan ayaa waxay tahay inaad tababar samaysid oo murqo quruxbadan yeelatid.
Bilow:– Bilow macnahedu waxa weye inaad markasta adigu horaysid. Adigu markasta wa inad noqota qofka wax kasta oo dhacaya u horeeya. Adigu waa inaad toos ugu tagta gabadha oo aad bilawda inaad la haasawdid oo aad la hadashd, halkii aad ka sugi lahayd inay iyadu marka hore kuu timaado oo ay hadalka kaaga horayso.
Dharka naagaha ee raga ku kacsadaan